ShweMinThar: ဘယ်လိုအခြေအနေတွေက ခန္ဓာကိုယ်​ ကြွက်သားထုတက်လာစေမလဲ
ဘယ်လို အခြေအနေတွေက သင့်ကို ကြွက်သားတက်စေမလဲ ???
ရေးခဲ့ဖူးသမျှ ဆောင်းပါးတွေထဲမှာ ဒီတစ်ခုက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ Admin အာမခံခဲ့ပြီးပြီ။ ဘာ့ကြောင့်လဲ။
၁၊ ကြွက်သားတက်အောင် တစ်ပတ်ဘယ်လောက်တောင် လုပ်ရမယ်။
၂၊ ကြွက်သားတက်အောင် ဘယ်လိုလေ့ကျင့်နည်းက သင့်တော်တယ်။
၃။ ကြွက်သားတက်အောင် ဘယ်အချိန်မှာ ဘာစားရမယ်။
၄။ ကြွက်သားတက်အောင် ဘယ်လောက် စားရမယ်။
စတဲ့ မေးခွန်းတွေကို အဖြေပေးပါလိမ့်မယ်။ ဟင့်အင်း၊ မဟုတ်သေးဘူး။ အဖြေပေးပါလိမ့်မယ် ဆိုတာထပ် ဘာ့ကြောင့် ဒီလိုဖြစ်သင့်လဲဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေကို သင့်ခေါင်းထဲမှာ ရှင်းသွားအောင် လမ်းပြပေးလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါကျမှသာ သင့် တွေးခေါ်မှုနဲ့ တွေးပြီး အော်၊ ဒါက ဒီလိုကြောင့်ကိုး ဆိုပြီး ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီအခါကျမှသာ သင်ကြားဖူးခဲ့သမျှမှာ ဘယ်ဟာက မှန်နိုင်တယ်၊ ဘယ်ဟာက ကောလဟာလ ပါဆိုတာ သင့်ဘာသာ ဆုံးဖြတ်နိုင်သွားပါလိမ့်မယ်။ Golden_Dreams page ရဲ့ အလုပ်က ဒီဆောင်းပါးမှာ သင့်ကို အကြောင်းပြချက်ပေးသွားရုံပါပဲ။ ကဲ စလိုက်ရအောင်။
" သားကြီး၊ လေ့ကျင့်ခန်းပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ပြီးရင် ကြွက်သားတွေ အမြန်တက်လာအောင် မိနစ် ၃၀အတွင်း Protein Shake ဖြစ်ဖြစ်၊ အသားဖြစ်ဖြစ် စားကွ။ အဲအချိန်က ကြွက်သားတွေ တည်ဆောက်တဲ့အချိန်။ အဲ အချိန်မှ မစားရင်တော့ မင်းလုပ်ထားသမျှ အလကားပဲ "
" လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီး ၂-၃ နာရီအတွင်းစားရင် ရတယ်၊ သားကြီး။ '
ဆိုသူတွေလဲ ရှိကြပြန်ပါရော။ ဘယ်ဟာ အမှန်လဲ၊ ဘယ်ဟာ အမှားလဲ။ ဒါက အစားအသောက်အပိုင်း။
လေ့ကျင့်ခန်းအပိုင်းကျ တစ်ချို့တွေက ဒီလိုဆိုပြန်တယ်။
" ရင်ဘတ်တစ်ရက်၊ နောက်ကျောတစ်ရက်၊ အောက်ပိုင်းတစ်ရက်၊ ပုခုံးနဲ့ Abs တစ်ရက် ဆော့။ "
" တွန်းတာတစ်ရက်၊ ဆွဲတာတစ်ရက်၊ အောက်ပိုင်းတစ်ရက် "
" အပေါ်ပိုင်းတစ်ရက်၊ အောက်ပိုင်းတစ်ရက် ခွဲဆော့"
အကုန်လုံးက ဒီလိုဆော့နည်းတွေဆော့ရင် ကြွက်သားတက်မယ် ဆိုပါတယ်။ ဘယ်ဟာ အမှန်လဲ၊ ဘယ်ဟာ အမှားလဲ။
ဒီလို မေးခွန်း၊ ဒီလို အယူအဆတွေကပဲ Trainer တွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နည်းစနစ် စကွဲပြားခြင်းရဲ့ မြစ်ဖျားခံရာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ဒါတွေရဲ့ အဖြေဟာ အဖြူ ဖြစ်မယ်၊ အမဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီး ပြောလို့မသင့်တော်ပါဘူး။ အဖြေဟာ ဘယ်ဟာက ပိုသင့်တော်တယ်၊ ဘယ်ဟာက ပိုမြန်စေတယ် ဆိုမှသာ မှန်မယ် ထင်ပါတယ်။ အကုန်လုံးကတော့ ပန်းတိုင်ကို ခရီးသွားနေမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်စက်၊ ဘယ်နည်းပညာဟာ အမြန်ဆုံးရောက်စေမယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာသာ ကွဲသွားမှာပေါ့။
ထပ်ပြောပါရစေ။ အပေါ်က ဘယ်လိုစား၊ ဘယ်လိုလုပ် ယူဆပုံတွေကပဲ Trainer တွေရဲ့ အာဘော်တွေကို ကွဲသွားစေတယ်။
ဒီဆောင်းပါးက ဒီလို အာဘော်အကွဲတွေထဲကမှ ဘယ်အာဘော်(ဘယ်နည်းလမ်း)ဟာ ပိုထိရောက်သလဲ ဆိုတာကို သင့်ကို နားလည်စေပါလိမ့်မယ်။
ပိန်ချင်သူ၊ Body လှချင်သူ ဘယ်လိုလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီ ဆိုကတည်းက သူတို့ရဲ့ ပန်းတိုင်ဟာ ကြွက်သား အသစ်တွေ ဖြစ်လာအောင် လုပ်ဖို့ပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်။
ပိန်ချင်သူ (၀နေသူ)တွေအတွက်ဆိုလဲ ကြွက်သား အသစ်တွေဟာ အဆီချဖို့အရာမှာ အလွန်အရေးကြီးကြောင်း ဆောင်းပါးအဟောင်းတွေမှာ ခဏ ခဏပြောခဲ့ပါတယ်။ ကြွက်သားတွေကသာ စွမ်းအင်အများဆုံးသုံးတာမလို့ ကြွက်သားအသစ်ရလာလေ အဆီကျ ကျစ်လျစ်ဖို့ မြန်လာလေပါပဲ။
ကဲ ဒီလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေ ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ ???
ယေဘူယျဆန်တဲ့ အလေးဆော့၊ အသားများများစားဆိုတာထပ် တစ်ဆင့် ထဲထဲဝင်ဝင် ကြည့်လိုက်ကြပါစို့။
ကြွက်သားအသစ် = ကြွက်သားတည်ဆောက်နေမှု - ကြွက်သားဖြိုခွဲနေမှု
Muscle mass = Protein synthesis - Protein breakdown ပေါ့။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်က တည်ဆောက်မှုနဲ့ ဖြိုခွဲမှုကို လိုအပ်သလို အမြဲလုပ်နေပါတယ်။ ဒီလို လုပ်နေတဲ့အခါမှာ တည်ဆောက်မှုက ဖြိုခွဲတာထပ် များနေရင် ကြွက်သားအသစ်ရမယ်။ ဖြိုခွဲထာက တည်ဆောက်တာထပ် ပိုများနေရင် ကြွက်သားတွေ ဆုံးရှုံးရမယ်။ ဒီလောက်ထိ ရှင်းတယ်ဟုတ်။
ဒီလိုဆိုရင် ကြွက်သားတည်ဆောက်နေမှု (Protein synthesis) က ဘာလဲ ဘယ်အချိန်မှာ ဖြစ်တာလဲ။ ကြွက်သားဖြိုခွဲမှု (Protein breakdown) ကရော ဘာလဲ ဘယ်အချိန်မှာ ဖြစ်တာလဲ။ သင်သိဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။
- ကြွက်သားတည်ဆောက်နေမှု (Protein synthesis)
ကြွက်သားတည်ဆောက်နေမှုဖြစ်စဉ်ဆိုတာ Protein ထဲမှာပါတဲ့ Amino acids တွေ အတူတကွ ပူးပေါင်းတဲ့အခါမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို Amino acids တွေ ဆင့်ကဲပူးပေါင်းခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်ကို ကြွက်သားအသစ်တွေဖြစ်စေပါတယ်။ ( BCAA supplement - Branch Chain Amino Acids သောက်သုံးရခြင်းရဲ့ အကြောင်းတရားတွေထဲက အချက်တစ်ချက်ပါ။ မှာယူလိုသူများအတွက် Chat box မှာ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ရက်သုံးဆယ်စာကို ၄၀၀၀၀ ၀န်းကျင်ပါ)
ဒါပေမယ့် ဒီလိုဖြစ်စဉ်က ဘာမှ မလုပ်ပဲနဲ့ ဒီတိုင်းဖြစ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ဖို့အတွက် သင်ဟာ ကြွက်သားတွေကို စိန်ခေါ်(Workout လုပ်)ဖို့လိုသလို Protein များတဲ့ အစားအစာ စားဖို့လဲလိုပါတယ်။ အလွယ်မှတ်ချင်ရင် ကြွက်သားတည်ဆောက်နေမှု Protein synthesis ဖြစ်ဖို့ အတွက်
၁၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ လိုတယ်
၂၊ Protein များတဲ့ အစားအစာ နေ့စဉ်စားဖို့လိုတယ်
- ကြွက်သားဖြိုခွဲနေမှု (Protein breakdown)
ကြွက်သားဖြိုခွဲနေမှုဖြစ်စဉ်မှာတော့ အပေါ်ကတည်ဆောက်နေမှုနဲ့ ပြောင်းပြန်ပါ။ ဒီဖြစ်စဉ်မှာတော့ Amino acids တွေဟာ တဖြေးဖြေး ဖြိုခွဲခံနေရပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်နေရခြင်းကို အများဆုံးအနေဖြင့် အစားလုံလောက်အောင် မစားတာရယ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးကာစမှာရယ် အများဆုံးတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးကာစမှာ တွေ့ရလဲဆိုတော့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ဆိုတာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ကြွက်သားတွေကို ဖိအားပေး ပြိုကွဲစေတာမလို့ပါ။ ဒီလို ပြိုကွဲမှသာ အာဟာရအသစ်တွေ ၀င်လာ၊ ကြွက်သားအသစ်တွေ ဖြစ်လာမယ် မဟုတ်လား။ အလွယ်မှတ်ချင်ရင် ကြွက်သားဖြိုခွဲနေမှု Protein breakdown ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းရင်းက
၁။ ကိုယ့် အရွယ်အစားနဲ့ လုံလောက်တဲ့ စွမ်းအင်မရလို့
၂။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီးကာစ အချိန်မလို့
( ဒီဆောင်းပါးနဲ့ မဆိုင်ပေမယ့် နံပတ် ၁ဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်အရွယ်အစားနဲ့ လုံလောက်တဲ့ စွမ်းအင်မရလို့ဆိုတာလေးကို အတိုရှင်းပြပါမယ်။ ကိုယ့်အရွယ်နဲ့ လုံလောက်တဲ့ စွမ်းအင်မရလို့ဆိုတာ အစာကို Weight ကျအောင်စားတာပေ့ါ။ လူက Weight ကျလာလေ၊ ကြွက်သားတည်ဆောက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်လေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ၀နေတဲ့လူတွေ အလေးဆော့ပြီး အဆီချလိုက်ရင် ဘာ့ကြောင့် ကြွက်သားက တက်လာသေးသလဲ။ ပြောတော့ ပေါင်ချိန်ကျရင် ကြွက်သားအသစ် မဖြစ်ဘူးဆို။
ဟုတ်ကဲ့။ ၀တဲ့သူတွေအနေနဲ့ ပေါင်ချိန်ချနေတုန်းမှာ အစာကို လျှော့စားတယ်။ ဒါပေမယ့် လိုအပ်တဲ့ စွမ်းအင်ကို အဆီက ရနေတုန်းပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် အဲဒီစွမ်းအင်နဲ့ Amino acids ဆင့်ကဲပူးပေါင်းတာနဲ့ တွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ အနည်းငယ်တော့ ကြွက်သားအသစ်တွေဖြစ်လာတာပါပဲ။ ဒါကပဲ BCAA ကို အဆီချတုန်းမှာ ကြွက်သားကျန်အောင် သောက်ရခြင်းရဲ့ နောက် အကြောင်းအရင်း တစ်ခုပါပဲ)
ပြန်ဆက်လိုက်ရအောင်။ အပေါ်က ပြောခဲ့တာတွေကို ရှင်းသွားအောင် မှတ်ချင်ရင် ဒီ Equation မှာ ကိန်း ၄ မျိုးရှိပါတယ်။
- Protein များတဲ့ အစားအစာ နေ့စဉ်စားဖို့လိုတယ်
- ကိုယ့်အရွယ်အစားနဲ့ လုံလောက်တဲ့ စွမ်းအင်မရလို့
- လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီးကာစအချိန်
ဒိ၎ခုကို ထပ်ရှင်းအောင် ကြည့်ချင်ရင်
( များလေကောင်းလေ၊ ဘယ်လောက်ထိများနိုင်သလဲဆို ခန္ဓာကိုယ် ဒါဏ်မဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ပမာဏအထိ။ Limit တော့ ရှိတာပေ့ါ)
(များလေကောင်းလေ၊ ဘယ်လောက်ထိများနိုင်သလဲဆို ခန္ဓာကိုယ်က ပိုနေတဲ့ အစာတွေကို အဆီအဖြစ် မသိုလောက်ခင်အထိ၊ တစ်လကို ၂-၃ ပေါင်ထိ ပို မတက်ခင်အထိ။ ကျော်သွားရင် မကောင်း)
(နည်းလေကောင်းလေ၊ ဆိုလိုတာက လုံလောက်တဲ့ စွမ်းအင်မရတဲ့နေ့ (အစာ မလုံမလောက် စားတဲ့နေ့) မရှိလေကောင်းလေ။ အမြဲတမ်း လုံလောက်အောင် စားနေ)
(ထိန်းချုပ်လို့ မရတဲ့ သဘာဝဖြစ်စဉ်၊ သင့်ဘက်က ဘာမှ မလုပ်နိုင်တဲ့ ကိန်းသေ)
ဒါတွေကို သိပြီ။ သိပြီဆိုတော့
-ဒီအချက်တွေကပဲ Trainer တွေရဲ့ အာဘော်ကို ဘယ်လို ကွဲသွားစေသလဲ။
-ဒီအချက်တွေကပဲ အပေါ်က မေးခွန်းတွေကို ဘယ်လို ရှင်းပေးနိုင်သလဲ ဆိုတာကို ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
ဒီအချက်ဟာ ဆောင်းပါးအစမှာ မေးခဲ့တဲ့
ဒီမေးခွန်းသုံးခုကို ဖြေပေးနိုင်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး အဖြေကို မသွားခင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်အပြီး ဘာတွေဖြစ်လာသလဲကို အတိုကြည့်လိုက်ရအောင်။
- ကြွက်သားတက်အောင် ဘယ်အချိန်မှာ ဘာစားရမယ်။ -
ဥပမာ သင်ဟာ Monday မှာ ရင်ဘတ်တွန်းခဲ့တယ်ဆိုပါစို့။ သင် ရင်ဘတ်ကစားပြီး အပြန်အချိန်ကစပြီး ကြွက်သားတည်ဆောက်မှု ဖြစ်စဉ်ဖြစ်နေပါပြီ။ (ကြွက်သားတည်ဆောက်ဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့လိုတယ်၊ Protein များတဲ့ အစားအစာ နေ့စဉ်စားဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ ၂ချက်ထဲက တစ်ချက်ကို သင်လုပ်ခဲ့တာကိုး)
ဒီလို စဖြစ်နေတဲ့ အချိန်ဟာ သာမန်လူ (Admin လို၊ စာဖတ်သူတို့လို) လုပ်ပြီးပြီးချင်းအချိန်ကစပြီး ၂၄ ကနေ ၃၆ နာရီထိကြာပါတယ်။ မျိုးရိုးအလွန်ကောင်းတဲ့လူ (အရမ်းရှားတာမလို့ Admin လဲ မဟုတ်သလို စာဖတ်သူလဲ မဖြစ်နိုင်ပါ) အတွက်တော့ ၄၈ နာရီထိကြာကြာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ပဲ Steroid ချထားသူဆိုရင်တော့ တစ်ချိန်လုံးကို အကန့်အသတ်မရှိဖြစ်နေတော့တာပါပဲ။
(ဒီလိုဆိုတော့ Steroid ချမယ်မလုပ်နဲ့။ Steroid ချရင် မျိုးမအောင် ကလေးမရဖြစ်တတ်သလို အသည်းလဲ ထိနိုင်ပါတယ်။ တခြား ခေါင်းမူးဘာညာလောက်ကတော့ စာမဖွဲ့လို)
ဒီတော့ ရင်ဘတ်ဆော့အပြီး Monday ညနေကနေ ကြွက်သားတည်ဆောက်ဖြစ်စဉ် ဖြစ်နေလိုက်တာ Wednesday မနက် အထိပဲပေါ့။ ဒီအချိန်ဟာ သင့်အတွက် အစားအစာ ဖြည့်ဆည်းဖို့ အချိန်ပါပဲ။
" မင်းပြောတဲ့ လုပ်ပြီးပြီးချင်း နာရီဝက် ဒါမှမဟုတ် ၂နာရီဆိုတဲ့ အချိန်တိုလေးလဲ မဟုတ်ဘူး။ ၂၄နာရီကနေ ၃၆နာရီကြာတဲ့ အချိန်ကာလ။ "
အပေါ်က " သားကြီး " လို့ လာခေါ်တဲ့ ကောင်ကို သင်ပြန်ပြောနိုင်ပြီဟုတ်။
- ကြွက်သားတက်အောင် တစ်ပတ်ဘယ်လောက်တောင် လုပ်ရမယ် -
ဒီမေးခွန်းကို ဖြေဖို့က အရမ်းကျယ်ပြန့်ပြီး ဒီဆောင်းပါးနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင်တွေးနိုင်ရင် တွေးတတ်သလို လွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုတွေးနိုင်ဖို့ အကြောင်းပြချက်လေးကို ဒီမှာ ပြလိုက်ပါမယ်။
၂၄နာရီကနေ ၃၆နာရီအထိ ကြွက်သားတည်ဆောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ ဆိုခဲ့တယ်ဟုတ်။ ဒါ့ထပ် ပိုအသေးစိတ်ချင်ရင် ကြွက်သားတည်ဆောက်မှုဟာ လေ့ကျင့်ခန်းပြီးပြီးချင်းကနေစလိုက်တာ ၂၄နာရီ ၀န်းကျင်မှာ အများဆုံးဖြစ်ပွါးပါတယ်။ ၂၄ နာရီနောက်ပိုင်းကနေ ၃၆ နာရီ ၀န်းကျင်မှာတော့ တဖြေးဖြေး အရှိန်လျော့လာပါပြီ။ ၃၆ နာရီနောက်ပိုင်းမှာတော့ မရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့။
ဒါဟာ ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုရင် ၃၆ နာရီနောက်ပိုင်းကစပြီး သင့်ရင်ဘတ်ကြွက်သားဟာ အသစ်တွေ တည်ဆောက်မနေတော့ပါဘူး။ သူ့ ရောက်နေတဲ့ အချိန်မှာပဲ ခဏတန့်နေပါတယ်။ Monday ကနေ လေ့ကျင့်တယ်ဆို Wednesday လောက်ကစပြီး သင့်ရင်ဘတ်ဟာ ရပ်သွားပါပြီ။ ဒီတော့ သင့်အနေနဲ့ ရင်ဘတ်ကြွက်သားကို ထပ်ကြီးထွားဖို့ လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် Thursday ၊ ဒါမှမဟုတ် Friday မှာ ထပ်လေ့ကျင့်ဖို့ လုပ်ရပါတော့မယ်။ ဒီနေရာမှာ သင် လေ့ကျင့်နေတဲ့ Program က အများကြီး စကားပြောပါတော့မယ်။ ဒီနေရာမှာ သင့် Trainer ရဲ့ အာဘော်၊ လမ်းညွှန်မှုဟာ အရေးပါ အရာရောက်လာပါပြီ။
Program တွေ များစွာရှိသလို Program တစ်ခုခြင်းစီက ဘာ့ကြောင့် ဒီလို ရေးဆွဲထားသလဲ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ရှိပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ဒီလောက် အသေးစိတ်တဲ့ အထိသွားဖို့ မဖြစ်နိုင်တာမလို့ လူသိအများဆုံး Program ၂ ခုကို အပေါ်ယံ နမူနာ ပြလိုက်ပါမယ်။
- ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းအလိုက် ခွဲပြီး ရေးထားတဲ့ Program 1 -
အသေးစိတ်မဟုတ်ပဲ ဥပမာ အပေါ်ယံပေါ့။
- Monday ရင်ဘတ် + လက်နောက် + Abs
- Tuesday နောက်ကျော + လက်ရှေ့
- Wednesday နား
- Thursday ပုခုံး + ဂုတ်
- Friday အောက်ပိုင်း + Abs
- Saturday - နား
- Sunday - ရင်ဘတ် + လက်နောက် + Abs
- ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သား လုပ်ဆောင်မှုအပေါ် အခြေခံ ရေးထားတဲ့ Program2-
- Monday ရင်ဘတ် + ပုခုံး + လက်နောက်
- Tuesday နောက်ကျော + ဂုတ် + လက်ရှေ့ + Abs
- Thursday အောက်ပိုင်း + Abs
- Friday နား
- Saturday ရင်ဘတ် + ပုခုံး + လက်နောက်
- Sunday နောက်ကျော + ဂုတ် + လက်ရှေ့ + Abs
ဒီ Program ၂ခုကို ကြည့်လိုက်ရင် Program 1 အတွက် တစ်ပတ်အတွင်းမှာ ပုခုံးနဲ့ နောက်ကျောဟာ တစ်ရက်စီပဲ ပါပါတယ်။ Program2အတွက်ကတော့ တစ်ပတ်အတွင်းမှာ ပုခုံးနဲ့ နောက်ကျောဟာ ၂ရက်ထိပါတာ တွေ့ရပါတယ်။
Program2အတွက် Monday မှာ ပုခုံးဆော့ပြီး Saturday မှာလဲ ပုခုံးထပ်ဆော့တာမလို့ ၂ကြိမ်ပါရုံတင်မကပဲ နားရက်လဲ ကြားထဲမှာ ၄ရက်တောင် ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Program2ဟာ Program 1 ထပ် ကြွက်သားအသစ်တွေ လှုံ့ဆော်တဲ့ နေရာမှာ ပိုထိရောက်စေနိုင်ပါတယ်။
Program 1 နဲ့ Program2ဘယ်ဟာကို သုံးမလဲဆိုတာ Trainer ရဲ့ အာဘော်နဲ့ အများကြီးသက်ဆိုင်ပြီး Program 1 တော့ဖြင့် သုံးစားလို့ မရဘူးလို့ ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
Program တစ်ခု ရေးဆွဲရာမှာ ရင်ဘတ်ဆို ပုံစံ ဘယ်နခု ပါမယ်၊ အကြိမ်ရေ ဘယ်လောက်ပါမယ်၊ ဒီနေ့အတွက် ပါတဲ့ ပုံစံတွေမှာမှ ဘယ်ဟာက အဓိက Main ၊ ဘယ်ဟာက အကူ Assistance စသည် စသည် ထည့်သွင်း စဉ်းစားထားတာတွေလဲ ရှိတာမလို့ Program 1 နဲ့ သင့် Trainer က လေ့ကျင့်ပေးနေတိုင်း မှားနေပြီလို့ မသတ်မှတ်စေချင်။
ဒါပေမယ့် သင်ဟာ ကိုယ်တိုင် ဆရာမပါပဲ လေ့ကျင့်နေပါက Program2ကဲ့သို့ နားချိန်လဲ ရှိ၊ တစ်ပတ်အတွင်း အကြိမ်ရေလဲ ပိုများတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သား လုပ်ဆောင်မှုအပေါ် အခြေခံ ရေးထားတဲ့ Program က သင့်ကို ကြွက်သား အမြန်ဆုံး တက်စေမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါရစေ။
ကဲ ဒါဆို " ကြွက်သားတက်အောင် တစ်ပတ်ဘယ်လောက်တောင် လုပ်ရမယ် " နဲ့" ကြွက်သားတက်အောင် ဘယ်လိုလေ့ကျင့်နည်းက သင့်တော်တယ် " ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေနိုင်ပြီ ဟုတ်။
Protein ဘယ်လောက် ပမာဏဟာ ကြွက်သားတည်ဆောက်ဖို့ လိုအပ်လဲဆိုရင် သင့် ခန္ဓာကိုယ် ကြွက်သားထုရဲ့ 80% ကနေ 120% ၀န်းကျင်လို့ အကြမ်းဆိုပါရစေ။
ဥပမာ သင့်အလေးချိန်က ၁၁၀ ဖြစ်ပြီး အဆီက ၁၀ပေါင် ဆိုပါစို့။ (ဘယ်လိုတွက်နိုင်လဲဆိုတာ နောင်မှ ဆောင်းပါးရေးလိုက်ပါမယ်) ဒါဆို သင့်ကြွက်သားထု အလေးချိန်က ၁၀၀ ပေါင်ပေါ့။
၁၀၀ ပေါင်ရဲ့ 80% = 80 grams protein
၁၀၀ ပေါင်ရဲ့ 120% = 120 grams protein ဆိုတော့ သင့်တစ်နေ့တာ Protein ပမာဏဟာ 80-120 grams အကြမ်းဖျင်း ၀န်းကျင်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း နားရက်တွေမှာပါ ကြွက်သားတည်ဆောက်မှု ဖြစ်စဉ်ဖြစ်နေတာမလို့ နားရက်တွေမှာလဲ ဒီလောက်ပမာဏ ရအောင် စားပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ Protein synthesis ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မှာပါ။
Muscle mass = Protein synthesis - Protein breakdown
ဆိုတော့ Protein synthesis မြင့်လေ Muscle mass ကြွက်သားတက်လေပေါ့။
-ကြွက်သားတက်ဖို့ ဘယ်အချိန်စားတာ အကောင်းဆုံးလဲ ဆိုတာလဲ သိပြီ။
-ကြွက်သားတက်ဖို့ ဘယ်လောက်ပမာဏ စားရမလဲ ဆိုတာလဲ သိပြီ။
-ကြွက်သားတက်ဖို့ တစ်ပတ် ဘယ်လောက်တောင် လုပ်ရမလဲ ဆိုတာလဲ သိပြီ။
-ကြွက်သားတက်ဖို့ ဘယ် Program တွေက ပိုသင့်တော်တယ် ဆိုတာလဲ သိပြီ။
ဘာတွေကိုများ စောင့်နေအုန်းမှာလဲ။ ပြန်ပြန်ဖတ်နိုင်အောင်၊ ၀ါသနာတူတွေကို ကြားဖူးနားဝအဆင့်ကနေ ထဲထဲဝင်ဝင် နားလည်နိုင်အောင် ဒီ post ကို Share ပေးကြပါ။
အဲ Share နေရုံနဲ့ မပြီးကျပါနဲ့။ ဒီထဲက အသိတွေနဲ့ သင်ကိုယ်တိုင်လဲ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို အရှိန်အဟုန်မြင့် ထုဆစ်လိုက်ကြပါအုန်းလို့။
Credit: Golden_Dreams´ Page
Posted by Alex Aung at 8:28 AM